Itoophiyaa keessatti laakkofsi namoota hongeef saaxilamanii miliyoona 7.5 gaye - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Itoophiyaa keessatti laakkofsi namoota hongeef saaxilamanii miliyoona 7.5 gaye
Ummanni beelaaf saaxilame kanniin naannolee Afaar, oromiyaafi Somaalee keessa jiraatuudha
Itoophiyaa keesssatti laakkofsi ummata bara kana hongeef saaxilamanii miliyoona 7.5 dhaqqabuu isaa mootummaan amane. Akka ibsa mootummaatti laakkofsi namoota beelaaf saaxilamanii gargaarsa nyaata hatattamaa barbaadanii isa baatii Hagayyaa (miliyoona 4.5) keessa gabaafame irra hedduu dabaleeti kan argame.
Dhabbanni Mootummoota Gamtoomanii (DMG ykn UN) tankaarfiin hatattamaa hinfudhatamu taanaan Itoophiyaa keessatti namoonni hongeef saxilaman miliyoona 15 dhaqabuun akka hinhafne akeekkachiisa cimaa laateera. Kana jechuun laakkofsa lammii beelaaf saaxilamee baay’ina ummata Sooriyaa woraanaaf qe’ee irraa buqqa’ee beelaafi rakkoo biraaf saaxilamee caaluu isaati. Tankaarfiin hatattamaa hinfudhatamu taanaan balaan cimaan kan as deemaa jiru ta’uu DMG akeekkachiisee.
Kanumaan wolqabatee, Dhabbata Mootummoota Gamtoomaniitti Ejensiin Daa’immanii (UNICEF) daa’imman 300,000 oli Itoophiyaa keessatti hanqina nyaataan dararamaa jiraachuu ifa taasiseera.
Dhaabbanni Akeekkachiisa Hongee (FEWS NET) laatus, Itoophiyaa keessatti horiin ummata irraa dhumuu itti fufeera jedha.
Itoophiyaa keessatti naannoleen bara kana hongee hamaan hedduu rukutaman naannoo Afaar bahaa, Oromiyaa bahaafi jiddugalaa fi naannoo Somaalee gara kibbaati.
Mootummaan Itoophiyaa uummata hongeef saaxilamaniif gargaarsa miliyoona $33 wolitti qabus, Dhaabbanni Mootummoota Gamtoomanii lubbuu ummata belayee baraaruuf miliyoonni $237 akka Itoophiyaa barbaachisuudha kan dubbataa jiru.
Hongee bara kanaa kan hammeesse dhabamiinsa roobaafi haala El Nino dha jedheeti mootummaan biyyattii kan dubbatu.
Previous articleDr. Teferi Mergo: A Few Questions to the Policymakers at the National Bank of Ethiopia
Next articleIrreessi Hara Arsadiifi biyyoota addunyaa garagaraa keessatti bifa oo’aan kabajame